Guusha xorriyada Qalbi Dhagax & Waji gabaxa Kheyre iyo Farmaajo – Warfaafiye:
Ali Mohyadin May 7, 2018 0
Rajada qalbi dhagax ayaa soo noolaatay, waxay kasoo dhex muuqataa isbadalka siyaasadeed ee Itoobiya ka dhacay, Alle dartiina todobaad kadib bannaanka inuu joogi doono ayaa la rajeynayaa.
Qalbi Dhagax hadduu soo baxo, waxaa abaalkiisa xorriyada, alle ka sakow iska leh shacbiga Soomaaliyeed oo ka gilgishay isagoo ah muwaadin Soomaaliyeed inuu ku dhex dhaco gacmo caddow ah.
Somalia waxaa ka dhacay, waxaan sooyaalka taariikhdeeda aan horay looga arag. Waxaa la maqli jiray “Shisheeye adeegsanaaya qof ama shaqsi” laakiin waxaa cusub in dowlad dhan loo adeegsado, in dadkeeda ay u gacan geliso gacma cadow ah, taasoo adduunka meel ay ka dhacday horay aan looga arag, hase ahaatee waxay ka dhacday Soomaaliyada cusub ee leh nidaamka Farmaajeysan oo uu hoggaamiyo xukuumad Kheyrlaawe ah. Qalbi Dhagax shaki la’aan wuxuu hubsaday inuu yahay Soomaali asal sax ah, leeyahayna shacbi quluubtooda u noqon kara gogol uu ku nasto, ku raaxeysto isagoo ku kalsoon qarankiisa Soomaaliyeed ee ayaandarada haysata.
Hadda, Addis Ababa waayahaan waxaa ku sugnaa mid ka mid ah qabqablayaasha maamul goboleedyada, ujeedada ugu muhiimsan ee tegitaankiisa Addis Ababa waxay tahay siyaaradii ku waajibtay sanad walba inuu iska xaadiriyo halkii looga talinayay. Hase ahaatee, Qalbi Dhagax ayaa ka mid ahaa dadkii lagu soo dhoweeyay si uu usoo daawado.
Axmed Madoobe wuxuu xaqiiqsaday in Qalbi Dhagax magac weyn yeeshay, hase ahaatee taa kuma faraxsana, sababtoo ah wuxuu cabsanayaa jagadiisa in lagu badalo qof isla beeshiisa ah, magac sharfanna leh. Dad badan ayaa aaminsan Axmed Madoobe inuu leeyahay door weyn oo siyaasadeed, saameyna ku leh dib u helida xorriyada Qalbi Dhagax. Marka la fiiriyo maamulada gobolada Axmed Madoobe waa kan ugu wadaniyasan uguna daacadsan, hase ahaatee waxaa beryahaan hortiisa ku qarqarxaayaan miinooyinka Farmaajo iyo guuxa Kheyr-laawe.
Qalbi-dhagax oo daal iyo hurdo xumo ka muuqato markii laga soo qabtay Gaalkacyo, askar Soomaaliyeed ilaalinayaan
Haddii uu Qalbi Dhagax bannaanka yimaado, Axmed Madoobe wuxuu heli doonaa taageero farabadan oo wax iskaaga caabin karo, duulaanka ugu imaan kara dhankaa iyo nidaamka Farmaajeysan.
Soo deysmada Qalbi Dhagax waxay astaan u tahay guusha shacbiga iyo guusha taariikhda Soomaaliyeed ee wanaaga u baahan. Hase ahaatee ayaandarada iyo waji gabaxa ugu weyn waxay haleeli doontaa Farmaajo, Kheyre, Sanbaloolshe iyo inta kale ee ka ag-dhow cilaaqaadka Itoobiya sida maamul goboleedyada qaarkood ee xiriirka dhow la leh nidaamka Addis Ababa.